နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: သင့်ရဲ့ Windows NT/2k/XP/Vista/Win7 admin password မေ့သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
သင့်ရဲ့ Windows NT/2k/XP/Vista/Win7 admin password မေ့သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
Windows NT/2k/XP/Vista/Win7 မှာ User Account ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Admin Acount ပဲဖြစ်ဖြစ် Password မေ့သွားရင် Offline NT Password&Registry Editor ကို အသုံးပြုပြီး Password ကိုဖျက်လို့ရပါတယ်။ သူခိုးလမ်းပြလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိကွန်ပျူတာမှာ Password မေ့သွားလို့ အခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာ ဘယ်လိုမှမလုက်တက်တော့ရင် Window ပြန်တင်ရတာတို့၊ Service Center ပို့ရတာတို့ဆိုရင် အချိန်ကုန်၊ အခန့်မသင့်ရင် မိမိရဲ့ Data တွေဆုံးရှုံးမှု့ မဖြစ်ရအောင် ဒီလိုနည်းလေးနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကို ဒီ Software ကို မသိသေးတဲ့ သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Offline NT Password&Registry Editor ကို CD နဲ့ အသုံးပြုလို့ရသလို USB ထည့်မှာ ထည့်သွင်းပြီးလည်း အသုံးပြုလိုရပါတယ်။
Offline NT Password&Registry Editor ကို အောက်မှာ Download ဆွဲလိုက်ပါ။
Download ဆွဲလို့ရလာတဲ့ Zip File ကို Extractလုပ်လိုက်ပါက ISO ဖိုင် ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ISO ဖိုင်ကို CD နဲ့ အသုံးပြု၇န်အတွက် Nero Burn အစရှိတဲ့ Burning Software ဖြင့် CD Burn လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပြီး CD/DVD Drive ထဲ မိမိ ကူးထားတဲ့ ISO CD ကိုထည့်ပြီး Boot တက်လိုက်ပါ။ အောက်တွင်ပြထားသလိုမျိုး မြင်တွေ့ရပါမယ်။
Registry လမ်းကြောင်းရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ Enter သာခေါက်လိုက်ပါ။
Download bootdisk image
Download USD Install
Posted by P Kyaw Swa at 4:39 AM